ဇူလိုင်လ 10, 2019 အားဖြင့် HOTMAIL255aComment ချန်ထား
သင် ... လုပ်ချင်ပါသလား ပြောင်းလဲမှုကို Instagram ကို Password ကို? ဒါဟာဖို့တကယ်လိုအပ် Instagram ကို Password ကို Reset သင့်အကောင့်ကိုကာကွယ်ပေးရန်. ဤဆောင်းပါးသည်များအတွက်နည်းလမ်းပြသ Instagram ကို Password ကိုပြောင်းလဲနည်း ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများအတွက်.
ဤတွင်ကျွန်မ၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးဆွေးနွေး Instagram ကို Password ကို Reset လုပ်နည်း အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းအတွက်လူတိုင်းလွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်အောင်. သငျသညျဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နာရန်ရှိသည်များနှင့်ရန်ကိုအောင်မြင်စွာကဖြည့်စွက် ပြောင်းလဲမှုကို Instagram ကို Password ကို.
သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုဖို့ရှိသည်ပြည့်စုံလမ်းညွှန်အကြောင်းကိုသိရန်. ခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်ခြေလှမ်းအတွက်, I have also included the official website link so that you can complete your whole process to Instagram ကို Password ကို Reset only at one place.
Instagram ကို Password ကိုပြောင်းလဲနည်း | အဆင့်လမ်းညွှန်ချက်အားဖြင့်အဆင့်
Check out the below mention steps to ပြောင်းလဲမှုကို Instagram ကို Password ကို. Just follow the step by step guide and complete it to successfully Instagram ကို Password ကို Reset.
ယခု, here on this page, you have to click on “လော့ဂ်အင်” ကြယ်သီး.
ယခု, enter your Phone number, username, or email and Password and press the “လော့ဂ်အင်” ကြယ်သီး.
ယခု, Edit ကိုပရိုဖိုင်းကိုအနီး options များ၏ပတ်ပတ်လည်စက်ဝိုင်းပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ.
သငျသညျ options အမျိုးမျိုး pop-up မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိယခုမြင်ရပါလိမ့်မည်, ယင်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “စကားဝှက်ကိုပြောင်းရန်” option ကို.
ပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏ဟောငျး password ကိုရိုက်ထည့်ရန်ရှိသည်, စကားဝှကိအသစ်, နှင့်ဂရုတစိုက်ထောက်ပံ့အာကာသနှင့်စာနယ်ဇင်းအတွက်နယူး Password ကိုအတည်ပြုပါ “စကားဝှက်ကိုပြောင်းရန်”.
သင်တို့အဘို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်စွက် ပြောင်းလဲမှုကို Instagram ကို Password ကို.
သင့်ရဲ့ Password ကိုဖန်တီးနေချိန်မှာသင်ကအကြီးအသုံးပြုသေချာအောင်, စာလုံးအသေး, တောလည်ရာ, နှင့်အထူးဇာတ်ကောင်သင့်ရဲ့ Password ကို Strong အောင်. သင့်ရဲ့ Instagram အကောင့်လုံခြုံရေးများအတွက်တကယ်အရေးကြီးသောကြောင့်.
ဤဆောင်းပါးသည်များအတွက်ပြည့်စုံလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည် Instagram ကို Password ကိုပြောင်းလဲနည်း. ခြေလှမ်းနည်းလမ်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းအတွက်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောပြည့်စုံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖတ်ပါနှင့်အောင်မြင်စွာကအတိုင်းလိုက်နာ Instagram ကို Password ကို Reset. သင့်အကောင့်လုံခြုံရေးအတွက်ခိုင်ခံ့သော Password ကိုဖန်တီးရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့.
သင်ဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မျှဝေချင်သို့မဟုတ်သင်မဆိုမေးခွန်းများရှိပါကပြီးတော့ဝေမျှဖို့အောက်ကဖော်ပြထားမှတ်ချက် box ကိုသုံး. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုမှာပုံမှန် update ကို get www-hotmail-com.email.
အောက်မှာ Filed: လျှို့ဝှတ်နံပါတ်အားမူလအတိုင်းပြန်လုပ်သည် အတူ Tagged: ပြောင်းလဲမှု instagram password ကို, instagram စကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်, instagram password ကို reset လုပ်နည်း